Wariye – Page 8 – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Ururka Iskaashatada Qaadka ee Somalia oo weeraray ku qaaday Kenya & Madaxweyne Farmaajo oo gurmad culus helay “Dalkayaga Ayaa Nooga Qaalisan Wax Walba” 56 mins ago
DAAWO:Hargeysa oo ay madaxa iskula jiraan Dowladda Hoose & Wasaarad kamid ah maamulka Muuse Biixi kadib markii…. 56 mins ago
XOG CULUS:Cabsidii ugu xooganayd oo ka taagan Madaxtooyada & Ciidamadii ugu badnaa Tikniko ku gaashaaman oo…..
January 22, 2019 |by Wariye| 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Warar hoose oo ay helayso Puntlandtimes.com ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad ah lagu soo daadiyay afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo lagu soo kordhiyay kuwii hore u joogay afaafka hore ee Villa Somalia ayaa heegan…
NADXIN & LA YAAB: Nin aaskiisii & Tacsidiisii diyaariyey geeridiisa ka hor
NAIROBI(P-TIMES)- Mallappa oo ah beeralay ku noolaa gobolka Andhra Pradesh ee koonfurta Hindiya markii uu gurigiisa ka tagayay bishii Agoosto ee sannadkii lasoo dhaafay, wuxuu qoyskiisa u sheegay “inuu khudaar soo iibinayo”. Reerkiisa waligood niyaddooda kuma soo dhicin inuu go’aan…
Diblumaasi Maraykan ah oo kulan la yeeshay kooxda Taliban
NAIROBI(P-TIMES)- Kooxda Taliban ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in wada hadalo ay kula yeesheen dalka Qadar danjiraha Maraykanka ee dalkaasi Zalmay Khalilzad. Arrintan ayay Taliban ku dhawaaqeen saacado uun kadib markii ay fuliyeen weerar ay dad ku dhinteen. Dadaalada…
Qaar kamid ah ganacsatada & Wadayaasha gaadiidka oo xabsiga Jowhar la dhigay
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka aan ka helayno magaalada Jowhar ee xarunta dowladd goboleedka Hir-Shabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in lix kamid ah ganacsatada magaaladaas xalay lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Jowhar. Ciidamada Nabadsugida Hir-Shabeelle ayaa la xaqiijiyay inay xireen ganacsatadan oo…
DAAWO:Jiidaha hore oo Tikniko & Ciidamadii ugu badnaa la iskugu keenay + Dagaal culus oo….
January 21, 2019 |by Wariye| 0
KISMAAYO(P-TIMES)-Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan kawadaan nawaaxiga deegaanka hoostaga magaalada Bu’aale ee gobolka Jubbada Dhexe. Taliyaha Qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cali Maxamed Maxamuud Bog Madow oo la hadlay Idaacada ciidamada qalabka sida ayaa…
DAAWO:Ciidamada Kenya oo bur buriyey xarun ay lahayd Shirkadda Hormuud
January 21, 2019 |by Wariye| 44
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya Gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay xalay gubeen xaruntii shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ee deegaanka Dhuyac Garoon oo ka tirsan degmada Salagle ee gobolka Jubbada Hoose. Qof ka tirsan shaqaalaha shirkadda oo waqtigaa ku sugnaa…
Qarax lagu dhaawacay dhakhaatiir Ajaanib ah oo ka dhacay Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES)- War dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax lagu dhaawacay dhakhaatiir ajaanib ah oo gelinkii dambe ee loogu xiray qarax gaari ay wateen dhaqaatiir ka tirsan cisbitaalka Muqdisho City Hospital ee magaalada Muqdisho. Mid kamid ah howl-wadeena cisbitaalka ayaa warbaahinta…
DAAWO:Madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay Saraakiil ka tirsan AMISOM
KISMAAYO(P-TIMES)- Madaxweynaha dowladd goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa booqday taliska qaybta labaad ee hawlgalka AMISOM. Madaxweynaha oo weli ku jira abaabulka hawlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa booqday taliskan oo ku yaala deegaanka Dhoobley. Madaxweynaha waxaa halkaas…
Kenya oo sheegtay in rag lagu tuhunsanaa weerarkii Al-Shabaab ee Nairobi ay isku soo dhiibeen
NAIROBI(P-TIMES)- Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay isa soo dhiibeen 3 kamid ah rag Kenyan ah oo aad loo baadi goobayey. Wargeyska Nation ayaa qoray inay ragaasi isku dhiibeen Booliska magaalada Isiyoolo ee Waqooyiga dalkaasi oo 285 KM dhanka Waqooyi…
DHAGAYSO:Gudoomiye Mursal”Hadii Mukhtaar Roobow lasii deyn waayo kursiga aan ku fadhiyo ayaan…..
BAYDHABO(P-TIMES)- Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay odayaasha, dhalinyarada, waxgaradka, haweenka, culimada iyo xildhibaanada kasoo jeeda Beesha uu ka dhashay Mukhtaar Roobow. Waxay soo jeediyeen odayaashu qodobo dhawr ah oo la xiriira xaaladihii ka…
Kenya oo ka hadashay weerar ay Al-Shabaab la beegsadeen shirkadd Shiines ah
NAIROBI(P-TIMES)- Booliska Kenya ayaa sheegay in 4 qof lagu dhaawacay weerar ay Dagaalamayaal ka tirsan Xarakadda Al-Shabaab waaberigii hore ee saakayto ku qaadeen xarun ay Shaqaale Shiinees ah ku leeyihiin Deegaanka Shimbireey oo 50-KM u jira magaalladda Gaarisa. Taliyaha Boliska…
DAAWO:Dhalinyarada Taleex oo baaq culus u diray madaxda cusub ee Puntland
GAROWE(P-TIMES)- Dhalinyarada degmada Taleex oo maanta warbaahinta kula hadashay gudaha magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa sheegay in ay ka jiraan deeganka Taleex oo xukuumaddii madaxweyne C/weli Gaas u magacowday gobol in ay ka jiraan baahiyo badan oo asaasi ah…
DAAWO:Dhimasho & Dhaawac ka dhasahay dab ka kacay Garowe kadib markii haan Gaas ah ay qaraxday
GAROWE(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dab khasaare nafeed iyo mid hantiyeed gaystay oo maanta ka kacay goob ganacsi oo ku taala magaalada Garowe ee caasimada Puntland. Dabkan ayaa waxa uu ka kacay goob Maqaaxi ah oo lagu iibiyo…
Gabadhii kaliya ee ku jirtay Baarlamaanka Puntland wacdaro dhigtay & Doorashadii maanta oo….
GAROWE(P-TIMES)- Naciimo Cabdi Caarshe oo ah gabadha kaliya ee kamida baarlamaanka cusub ee Dawlada Puntland ayaa kamid noqotay gudiga joogtada ah ee baarlamaanka kadib markii 56-cod ay kaga guulaysatay Saadiq Abshir Garaad oo baarlamaanka kasoo mid ahaa tan iyo asaaskii…
Khilaaf soo gala dhex galay madaxda dowladd deegaanka & Mas’uuliyiin xabsiga la dhigay
HARGEYSA(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee xarunta dowladd deegaanka Soomalida ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in khilaaf soo kala dhex galay madaxweynaha dowladd deegaanka Mustafe Maxamed Cagjar iyo gudoomiyaha Xisbiga talada dowladd deegaanka haya Axmed Shide…
Al-Shabaab oo gudaha u galay deegaano ka tirsan Kenya & Shaqaale ka tirsan shirkadd Ajnabi ah oo….
MUQDISHO(P-TIMES)- Booliska Kenya waxay sheegeen in xalay dabley hubeysan ay rasaas ku fureen goob ay dhismo ka waday shirkad Shiinees ah. Taliyaha booliska Joseph Boinnet wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ay fashiliyeen weerarka ka dhacay deegaanka Shimbirey oo ku yaalla…
DEG DEG:Doorashadii gudida joogta ah ee Baarlamaanka Puntland oo hada socota & Xubno badan oo ku wada loolamaya
GAROWE(P-TIMES)- Xarunta Baarlamaanka Puntland ee magaalada Garowe ayaa waxaa haatan ka socota doorashada xubnaha gudiga joogtada ah ee Baarlamaanka cusub ee Puntland yeelatay. Xubnahanoo ka koobnaan doona 10 xubnood ayaa waxaa lagu salaynayaa gobolada 9-ka ah ee Puntland, waxaana ilaa…
Dowladda Soomaaliya oo dowladaha Carbeed ka codsatay in laga cafiyo deymaha
RIYAD(P-TIMES)- Wasiirka arrimaha dibedda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa sheegay in Soomaaliya ay Dowladaha ku bahoobay Ururka Jaamacadda Carabta ka codsatay in laga cafiyo deymaha ay muddada dheer ku leeyihiin. Shirkan oo ah kii Afaraad ee ay horumarinta…
DEG DEG+DAAWO: Ciidamada Somaliland oo qabsaday deegaankii ugu muhiimsanaa dalka oo dhan & Duleedka Garowe oo xaalad dagaal ka taagan tahay kadib markii…..
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland oo qabsaday Ceelka Shidaalka deegaan Hol Hol ee gobolka Sool. Dadka deegaanka ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in ciidamo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka kana tirsan kuwa maamulka Somaliland…
DAAWO:Magacyada & Dhalashada ragii ka dambeeyey weeraradii Nairobi oo la shaaciyey
NAIROBI(P-TIMES)- Wargeyska The Standard ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray inay Boliska dalkaasi ka codsadeen dadweynaha inay taageero ka geystaan sidii loo soo qaban lahaa 6 nin oo Kenyan ah, kuwaasi oo la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen…